ဒီနေ့ရဲ့ နေ့လယ်ခင်းအတွက် နောက်ဆုံးရသတင်းတိုများလာပါပြီခင်ဗျာ ….. – Myan Ball
ဒီနေ့ရဲ့ နေ့လယ်ခင်းအတွက် နောက်ဆုံးရသတင်းတိုများလာပါပြီခင်ဗျာ …..
Posted on August 14, 2019 by hein
၁။ သက်တမ်းရင့်ဝိုင်တစ်ခွက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သေးတဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ်
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ အမှုဆောင်ချုပ်ဟောင်း မော့ဂီက အီဘရာဟီမိုဗစ်တစ်ယောက် စီးရီးအေမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ခြေစွမ်းကို ပြသနိုင်ဆဲဖြစ်တယ်လို့ ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။။ အသက် (၃၇) နှစ်အရွယ် ဆွီဒင်လက်ရွေးစင်ဟောင်းကြီးကို မော့ဂီက ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး “မိုဗစ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က သူ့ရဲ့လက်ရှိအသက်အရွယ်မှာတောင် အကောင်းဆုံးပုံစံပြသနေဆဲပါ။” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ စတာရစ်ခ်ျကို စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ဒီစီယူနိုက်တက်
မေဂျာလိဂ်ကလပ် ဒီစီယူနိုက်တက်အသင်းဟာ လီဗာပူးအသင်းနဲ့ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး စတာရစ်ခ်ျကို ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒဏ်ရာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ လုပ်ခလစာအနေအထားကြောင့် စတာရစ်ခ်ျကို မခေါ်ယူဖြစ်တော့ဘူးလို့ သတင်းများထွက်ပေါ်ပြီးမှ ရွန်းနီရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ စတာရစ်ခ်ျကို စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ သတင်းများပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။
၃။ ရူဂါနီအတွက် အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေကြပြီ
ရိုးမားအသင်းနဲ့မိုနာကိုအသင်းတို့ဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ ရူဂါနီကို ခေါ်ယူဖို့ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားနေကြပြီဖြစ်ပါုတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းကလည်း ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ရူဂါနီကို ရိုးမားအသင်းက စတင်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အသက် (၂၅) နှစ်အရွယ် အဆိုပါနောက်ခံလူကို ပြင်သစ်လီဂူးကလပ်အသင်းကပါ ချိတ်ဆက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဘယ်သွားမလဲ မသေချာသေးတဲ့ ဘာလိုတယ်လီ
အီတလီကလပ် ဘရက်စီယာအသင်းနဲ့ ဘရာဇီးကလပ် ဖလာမင်ဂိုအသင်းတို့ဟာ ဘာလိုတယ်လီကို ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။ အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ အီတလီတိုက်စစ်မှူးဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ဖလာမင်ဂိုအသင်းနဲ့ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေပေမယ့် လက်ရှိအချိန်အထိ သဘောတူညီမှုမရရှိသေးတာကြောင့် ဘာလိုတယ်လီရဲ့ မွေးရပ်မြေက ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ ဘရက်စီယာအသင်းက ဘာလိုတယ်လီကို ကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ချီယေဆာအတွက် လာမယ့်နွေမှာ အပြိုင်နွှဲမယ့် ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့အင်တာမီလန်
လာမယ့်နွေရာသီမှာ ဖီအိုရင်တီးနားအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမား ချီယေဆာအတွက် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ အင်တာမီလန်အသင်းတို့ ပြိုင်ဆိုင်လာကြမယ်လို့ အီတလီရဲ့နာမည်ကြီးသတင်းစာတစ်စောင်က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၂၁) နှစ်အရွယ် ဒီကြယ်ပွင့်ကစားသမားကို ဖီအိုရင်တီးနားအသင်းက ရောင်းချဖို့ စိတ်ကူးမရှိပေမယ့် လာမယ့်နွေရာသီမှာတော့ လက်လွှတ်ရဖွယ်ရှိနေပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း (၇၀) သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
၆။ အယ်လ်ဒါဝီရယ်လ်ကို ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ စပါး
စပါးအသင်းဟာ နောက်ခံလူ အယ်လ်ဒါဝီရယ်လ်ကို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ လက်လွှတ်ရမယ့် အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၃၀) အရွယ် ဘယ်လ်ဂျီယံနောက်ခံလူအနေနဲ့ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း နောက်ဆုံးကာလအတွင်းကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး စာချုပ်သစ်မချုပ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ပါက လာမယ့်ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ အခြားသောကလပ်အသင်းတစ်သင်းနဲ့ အကြိုသဘောတူညီမှု စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ လူတွေခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်း မလိုတာတွေ ရှင်းတော့မယ့် အက်စတွန်ဗီလာ
ဘက်ဆစ်တပ်အသင်းဟာ အက်စတွန်ဗီလာအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဂျိုနသန်ကိုဒီဂျာကိုခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေးနေကြောင်း တူရကီသတင်းမီဒီယာတစ်ခုမှ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ် အိုင်ဗရီကို့စ်တိုက်စစ်မှူးဟာ (၂၀၁၆) ခုနှစ်မှာ အက်စတွန်ဗီလာအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လာမယ့်ရာသီကုန်မှာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမယ့် ကစားသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ လူငယ်တွေနဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်နေဆဲ ချဲလ်ဆီး
ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့နောက်ခံလူ ကန်နက်အိုမီရူအိုဟာ လာလီဂါကလပ် လီဟာနက်စ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် (၄.၆) သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီလို့ သိရှိရပါတယ်။ နိုင်ဂျီးယားလူမျိုးကစားသမားဟာ ချဲလ်ဆီးအသင်းကြီးအတွက် တစ်ပွဲမှ ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ဖူးခြင်းမရှိဘဲ အင်္ဂလန်၊ နယ်သာလန်၊ တူရကီနဲ့စပိန်ကလပ်အသင်းတွေမှာ အငှားနဲ့သွားရောက် ကစားခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အငှားနဲ့သွားကစားခဲ့တဲ့ လီဟာနက်စ်အသင်းဆီ အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါ။
၁။ သကျတမျးရငျ့ဝိုငျတဈခှကျဖွဈကွောငျး သကျသပွေနိုငျသေးတဲ့ အီဘရာဟီမိုဗဈ
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ အမှုဆောငျခြုပျဟောငျး မော့ဂီက အီဘရာဟီမိုဗဈတဈယောကျ စီးရီးအမှော ထိပျတနျးအဆငျ့ခွစှေမျးကို ပွသနိုငျဆဲဖွဈတယျလို့ ခြီးကြူးသှားခဲ့ပါတယျ။။ အသကျ (၃၇) နှဈအရှယျ ဆှီဒငျလကျရှေးစငျဟောငျးကွီးကို မော့ဂီက ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့တိုကျစဈမှူး ရျောနယျဒိုနဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီး “မိုဗဈရဲ့ခန်ဓာကိုယျက သူ့ရဲ့လကျရှိအသကျအရှယျမှာတောငျ အကောငျးဆုံးပုံစံပွသနဆေဲပါ။” လို့ ပွောကွားသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၂။ စတာရဈချြကို စောငျ့ကွညျ့နဆေဲဖွဈတဲ့ ဒီစီယူနိုကျတကျ
မဂြောလိဂျကလပျ ဒီစီယူနိုကျတကျအသငျးဟာ လီဗာပူးအသငျးနဲ့ စာခြုပျဖကျြသိမျးပွီးနောကျပိုငျး အသငျးလကျမဲ့ဖွဈနတေဲ့ တိုကျစဈမှူး စတာရဈချြကို ချေါယူဖို့ စောငျ့ကွညျ့နဆေဲဖွဈတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။ ဒဏျရာသမိုငျးကွောငျးနဲ့ လုပျခလစာအနအေထားကွောငျ့ စတာရဈချြကို မချေါယူဖွဈတော့ဘူးလို့ သတငျးမြားထှကျပျေါပွီးမှ ရှနျးနီရဲ့နရောမှာ အစားထိုးဖို့ စတာရဈချြကို စောငျ့ကွညျ့နဆေဲဖွဈတယျလို့ သတငျးမြားပွနျလညျထှကျပျေါလာခဲ့တာပါ။
၃။ ရူဂါနီအတှကျ အပွိုငျအဆိုငျဖွဈနကွေပွီ
ရိုးမားအသငျးနဲ့မိုနာကိုအသငျးတို့ဟာ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့နောကျခံလူ ရူဂါနီကို ချေါယူဖို့ အပွိုငျအဆိုငျကွိုးစားနကွေပွီဖွဈပါုတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးကလညျး ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားခဲ့တဲ့ ရူဂါနီကို ရိုးမားအသငျးက စတငျဆကျသှယျခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ အသကျ (၂၅) နှဈအရှယျ အဆိုပါနောကျခံလူကို ပွငျသဈလီဂူးကလပျအသငျးကပါ ခြိတျဆကျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
၄။ ဘယျသှားမလဲ မသခြောသေးတဲ့ ဘာလိုတယျလီ
အီတလီကလပျ ဘရကျစီယာအသငျးနဲ့ ဘရာဇီးကလပျ ဖလာမငျဂိုအသငျးတို့ဟာ ဘာလိုတယျလီကို ချေါယူဖို့ ပွငျဆငျလကျြရှိပါတယျ။ အသငျးလကျမဲ့ဖွဈနတေဲ့ အီတလီတိုကျစဈမှူးဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ ဖလာမငျဂိုအသငျးနဲ့ ဆှေးနှေးမှုပွုလုပျနပေမေယျ့ လကျရှိအခြိနျအထိ သဘောတူညီမှုမရရှိသေးတာကွောငျ့ ဘာလိုတယျလီရဲ့ မှေးရပျမွကေ ကလပျအသငျးဖွဈတဲ့ ဘရကျစီယာအသငျးက ဘာလိုတယျလီကို ကွားဖွတျချေါယူဖို့ ပွငျဆငျလာတာ ဖွဈပါတယျ။
၅။ ခြီယဆောအတှကျ လာမယျ့နှမှော အပွိုငျနှဲမယျ့ ဂြူဗငျတပျဈနဲ့အငျတာမီလနျ
လာမယျ့နှရောသီမှာ ဖီအိုရငျတီးနားအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကစားသမား ခြီယဆောအတှကျ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့ အငျတာမီလနျအသငျးတို့ ပွိုငျဆိုငျလာကွမယျလို့ အီတလီရဲ့နာမညျကွီးသတငျးစာတဈစောငျက ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ အသကျ (၂၁) နှဈအရှယျ ဒီကွယျပှငျ့ကစားသမားကို ဖီအိုရငျတီးနားအသငျးက ရောငျးခဖြို့ စိတျကူးမရှိပမေယျ့ လာမယျ့နှရောသီမှာတော့ လကျလှတျရဖှယျရှိနပွေီး ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရိုသနျး (၇၀) သတျမှတျထားကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
၆။ အယျလျဒါဝီရယျလျကို ဆုံးရှုံးရမှာကွောကျနပွေီဖွဈတဲ့ စပါး
စပါးအသငျးဟာ နောကျခံလူ အယျလျဒါဝီရယျလျကို အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ လကျလှတျရမယျ့ အန်တရာယျနဲ့ ရငျဆိုငျနရေပွီဖွဈပါတယျ။ အသကျ (၃၀) အရှယျ ဘယျလျဂြီယံနောကျခံလူအနနေဲ့ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျး နောကျဆုံးကာလအတှငျးကို ရောကျရှိလာပွီဖွဈပွီး စာခြုပျသဈမခြုပျဆိုဖွဈခဲ့ပါက လာမယျ့ဆောငျးရာသီအပွောငျးအရှမှေ့ာ အခွားသောကလပျအသငျးတဈသငျးနဲ့ အကွိုသဘောတူညီမှု စာခြုပျခြုပျဆိုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
၇။ လူတှခေျေါပွီးနောကျပိုငျး မလိုတာတှေ ရှငျးတော့မယျ့ အကျစတှနျဗီလာ
ဘကျဆဈတပျအသငျးဟာ အကျစတှနျဗီလာအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူး ဂြိုနသနျကိုဒီဂြာကိုချေါယူဖို့ ဆှေးနှေးနကွေောငျး တူရကီသတငျးမီဒီယာတဈခုမှ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ အသကျ (၂၉) နှဈအရှယျ အိုငျဗရီကို့ဈတိုကျစဈမှူးဟာ (၂၀၁၆) ခုနှဈမှာ အကျစတှနျဗီလာအသငျးကို ပွောငျးရှရေ့ောကျရှိလာခဲ့တာ ဖွဈပွီး လာမယျ့ရာသီကုနျမှာ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျး ကုနျဆုံးမယျ့ ကစားသမားတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
၈။ လူငယျတှနေဲ့ စီးပှါးရေးလုပျနဆေဲ ခြဲလျဆီး
ခြဲလျဆီးအသငျးရဲ့နောကျခံလူ ကနျနကျအိုမီရူအိုဟာ လာလီဂါကလပျ လီဟာနကျဈအသငျးကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ (၄.၆) သနျးနဲ့ ပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့ပွီလို့ သိရှိရပါတယျ။ နိုငျဂြီးယားလူမြိုးကစားသမားဟာ ခြဲလျဆီးအသငျးကွီးအတှကျ တဈပှဲမှ ပါဝငျကစားပေးခဲ့ဖူးခွငျးမရှိဘဲ အင်ျဂလနျ၊ နယျသာလနျ၊ တူရကီနဲ့စပိနျကလပျအသငျးတှမှော အငှားနဲ့သှားရောကျ ကစားခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက အငှားနဲ့သှားကစားခဲ့တဲ့ လီဟာနကျဈအသငျးဆီ အပွီးသတျပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့တာပါ။
အဆင်မပြေမူတစ်ချို့ကြောင့် အသင်းပြောင်းဖို့ရှိနေတဲ့ ဆန်းချက်စ်ကို အလိုရှိနေဆဲ နည်းပြဆိုးလ်ရှား
ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေ စတင်ပါဝင်လာတဲ့ ခရာဘောင်းဖလား ဒုတိယအဆင့်မဲခွဲပွဲ ဘယ်အသင်းတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့သွားသလဲ
၁။ ဝမ်ယာမာကို မခေါ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ထရက်ဇွန်စေပါ် တူရကီကလပ် ထရက်ဇွန်စပေါ်အသင်းဟာ စပါးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဝမ်ယာမာကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း စတာရစ်ခ်ျကို ခေါ်ယူပြီးတဲ့ ဒီအသင်းဟာ စပါးအသင်းမှာ အန်ဒွန်ဘီလီ၊ […]
နေမာကိုရဖို့ ပူပူနွေးနွေးခေါ်ထားတဲ့ ကစားသမားအသစ်ကိုပါ အလိုက်ပေးတော့မယ့် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့အတွက် အခြားသော နံနက်ခင်းသတင်းများ ……..
၁။ ဆဲလ်တစ်နဲ့သတင်းတွေကို မသိဘူးဆိုတဲ့ ဂျော်ဒန်အိုက်ဘ် ဘုန်းမောက်အသင်းရဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဂျော်ဒန်အိုက်ဘ်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ ဆဲလ်တစ်အသင်းနဲ့ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းများကို မသိရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆဲလ်တစ်အသင်းနည်းပြ နေးလ်လန်နွန်ဟာ ဂျော်ဒန်အိုက်ဘ်ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် […]
စနေနေ့နံနက်ခင်းအတွက် အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတိုများ ….
၁။ အနာဂတ်အတွက် ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ့် အေစီမီလန်နောက်ခံလူ အေစီမီလန်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ လာဆော့တ်ဟာ အတ္တလန်တာအသင်းကို ပြောင်းဖြစ်၊ မပြောင်းဖြစ် ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကစားသမားကို အငှားချဖို့ ကလပ်နှစ်သင်းကြား ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို (၂) သန်းနဲ့ သဘောတူညီမှု […]
လှုပ်ခတ်နေဆဲ ဥရောပအပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက်နဲ့ အခြားသောနေ့လယ်ခင်းသတင်းတိုများ ……
၁။ အနာဂတ်မသေချာသေးတဲ့ ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ တောင်ပံကစားသမားဖြစ်သူ ကနေဒီဟာ အသင်းက ထွက်ခွာဖို့ စီစဉ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ် ဒီကစားသမားရဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းက လာမယ့် နွေရာသီမှာ ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပြီး ဥရောပ […]
အသင်းသစ်ကြီးအတွက် ဆွာရက်ဇ်ကို ခေါ်ဖို့ မျက်စိကျနေတဲ့ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းနဲ့ အခြားသောနံနက်ခင်းသတင်းတိုများ …..
၁။ ရိုးမားမှာ ဆက်ရှိနေဖို့ စည်းရုံးခံနေရတဲ့ ဂျက်ကို ရိုးမားအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဂျက်ကို ကို အသင်းမှာ ဆက်နေဖို့ အတွက် အသင်းခေါင်းဆောင် ဖလော်ရန်ဇီက သူ့ရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် လက်ပတ်ကို ပေးအပ်ပြီး စည်းရုံးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ […]
နေမာအတွက် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ ဂျိမ်းစ်၊ ဘေးလ်၊ နာဗက်စ် သုံးယောက်ပေါင်းနဲ့ ယူရိုသန်း (၁၀၀) ကမ်းလှမ်းမှုကို ပယ်ချခဲ့ပြန်တဲ့ PSG နဲ့အတူ အခြားသောနေ့လယ်ခင်းသတင်းတိုများ ….
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိ KU Leuven တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခများရဲ့တိကျသေချာတဲ့ တွက်ချက်မှုများအရ မက်ဆီက ရော်နယ်ဒိုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒီပါမောက္ခတေတွဟာ နယ်သာလန်အခြေစိုက် အချက်အလက် ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Sci Sports က […]
အသေးစိတ်တဲ့စနစ်တကျတွက်ချက်မှုတွေမှာတော့ မက်ဆီက ရော်နယ်ဒိုထက် ပိုကောင်းတဲ့ ကစားသမားဖြစ်နေပါပြီ ….